Kulamo xal raadin ah ayaa ka bilaawdey Boosaaso | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Kulamo xal raadin ah ayaa ka bilaawdey Boosaaso
Waxaa Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari wada-hadallo xal raadin ah ka bilaabay mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland & siyaasiyiin hore si xal looga gaaro khilaafka u dhaxeeya Madaxtooyada Puntland & Saraakiisha Ciidamada PSF.
Mid kamid ah Hoteelada Magaalada Boosaaso ayaa waxaa kulan horudhac ah ku yeeehay guddi ka kala socda labo dhinac oo nabad-raadin ah si ay u dejiyaan xiisadda la xariirta xil-wareejinta PSF.
Guddiga labada dhinac kasocday ee kulmay ayaa kala ahaa Wasiirka maaliyada Xassan Shire, wasiirka Warfaafinta Cabdullaahi Timacade, Wasiirkii hore maaliyada Cabdullaahi Dhaqaaje iyo Xildhibaan Faarax Biyoole, waxaana ay isku afgarteen in xaalada la dejiyo lagana durko wax halis-galinaya Amniga Magaalada Boosaaso.
Tan iyo markii Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu xilka ka qaaday Agaasimaha Hay’adda PSF Maxamuud Cismaan Diyaano ayaa waxaa Magaalada Boosaaso laga dareemayay xiisad sababi karta dagaal, iyada oo xalay ay ugu dambeeysay Madaxtooyada Puntland ay Ciidamo farabadan geeysay agagaarka Xarumaha Ciidamada PSF ee Magaalada Boosaaso.
Kulamo xal raadin ah ayaa ka bilaawdey Boosaaso was last modified: December 9th, 2021 by warsan radio
laamaha Amniga oo fuliyay howlgal lagu qabtay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Dhageyso:-Wareysi Fahad Maxamed Diiriye Gudoomiyaha Xaafada Farjano ee kismaayo
Dhageyso:-Feysal Cali Waraabe oo Cambaareeyay Xariga Muqtaar Roobow Kuna Baaqay Nabada